Accueil Ny fiainam-piangonana Formalités Batisa
Écrit par Ny Mpitan-tsoratra
- Ny fiangonana dia manatanteraka batisa ny zaza atolotry ny Ray aman-dReniny ; misy dinidinika hataon’ny Mpitandrina amin’ireo Ray aman-dReny niteraka ny zaza momba ny sakramenta ny Batisa.
- Tsy maintsy mpandray fanas
an’ny Tompo ny iray amin’ny ray aman-drenin’ny zaza.
- Ho an’ireo Ray aman-dReny izay mbola tsy mpandray ny fanasan’ny Tompo dia manao dinidinika miaraka amin’ny Mpitandrina ; iray volana mialoha ny andro hanaovana ny batisa.
- Manao batisa ny olon-dehibe koa ny fiangonana.
(Fenoina ary haverina 1 volana alohan’ny andro hanaovana ny batisa)
ANARANA SY FANAMPIN’ANARANA
Zaza :............................................................................................. .............................................................................................
Ray :................................................................................................. Reny :.................................................................................................
Fiangonana niaviana teo aloha :....................................................................
Telefonina (raha azo atao) :..............................
Mpiantoka : ................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... ....................................................................................